I-Plasma Ibhola kunye novavanyo lokukhanya kwe-Fluorescent
Ungakwazi ukulawula ukuba i-bulb fluorescent ingakanani ibhalelwe ibhola ye-plasma ngokushenxisa isandla sakho phantsi kokukhanya kwe-fluorescent. Anne Helmenstine (Ii-2013 Ig IiNkozo zeNobel)
Unokwenza uvavanyo olwenzululwazi lwezesayensi usebenzisa ibhola ye-plasma kunye ne-bulb light-light bulb. Ibhola le-fluorescent liya kukhanya njengoko uzisa kufuphi nebhola ye-plasma. Lawula ukukhanya usebenzisa isandla sakho, ngoko ke inxalenye yayo ikhanya. Nantsi into oyenzayo kwaye kutheni isebenza.
I-bulb light light (nayiphi na uhlobo)
Vula ibhola ye-plasma.
Yizisa i-bulb fluorescent kufuphi nebhola ye-plasma. Njengoko usondele kwiplasma, i-bulb iya kukhanya.
Ukuba usebenzisa i-stick long long fluorescent, unokulawula ukuba ubuninzi bombhobho bubhalwa ngesandla sakho. Inxalenye yombhobho ecaleni kwebhola ye-plasma iya kuhlala ilele, ngelixa isahlulo sangaphandle siya kuhlala simnyama. Uyakubona u-evanescence okanye ukunyuka kokukhanya njengoko ukhwelisa ukukhanya ngakumbi kwibhola ye-plasma.
Ibhola ye-plasma yilayidi egqityiweyo equkethe i- gases ephezulu . I-electrode ephakamileyo yamandla ihlala phakathi kwebhola, ixhunywe kumthombo wamandla. Xa ibhola ivuliwe, i-current current electrical ionizes i-gas kwibhola, idala iplasma. Xa uthinta umbhobho we-plasma, unokubona indlela ye-plasma filaments esebenza phakathi kwe-electrode kunye ne-shell ye-glass shell. Nangona ungeke uyibone, i-current-frequency current current exceeds the surface of the ball. Xa uletha ityhubhu ye-fluorescent kufuphi nebhola, amandla afanayo athabathe i-athomu ze-mercury kwi-bulb fluorescent. Iim atom ezivuyayo zikhupha ukukhanya kwe-ultraviolet ehlanganiswe kwiingubo ze-phosphor ngaphakathi kokukhanya kwe-fluorescent, ukuguqula ukukhanya kwe-ultraviolet ekukhanyeni okubonakalayo.
Yenza ibhetri yezithelo
I-Plasma Ball - Ukuhlaziywa
Iprojekti yeLesprechaun Trap Science
Ngaba Ndiyakhula Amakhadi e-Quartz ekhaya?
Indlela Yokwenza Abaqholi Bemibala
Iiprojekthi zeSayensi zoLungileyo
Indlela yokwenza i-Invisible Ink - i-Cornstarch
Iiprojekti zeSayensi eziPhakamileyo zeSikolo
Magic Genie kwiNgqungquthela yeBela
Iimveliso zeDippin ze-Homemade Dots Liquid i-nitrogen Ice Cream
Indlela yokwenza iintyatyambo eziBala
Khanyisa kwiPumpkin Emnyama
Ngaba i-NBC Poll ithi 86% Inceba 'KuThixo Sithemba'?
7 Izinyathelo zokumisela ukuCwangcisa ubomi
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: Cantare
Fumana okuthi Igama lakho leTshayina liza kuba yiliphi le nguqulelo
Ziziphi Iingxaki Ngaba iiNdaba zeendaba zijongene namhlanje?
IsiXhosa v. United States (1970)
Iinguqu ezimfutshane zeMithetho elishumi
I-Dharma Wheel (Dharmachakra) Uphawu lwesiBuddhism
Sebenza IsiGama kwisiJamani
Imfazwe Yesizwe saseMerika: uGrigadier Jikelele uRobert H. Milroy
I-Antithesis (igrama kunye neRhetoric)
I-SAT Information Information Test Test
Iimidlalo zokunyuka kweMidlalo kwiMaphule Canyon
I-Admission University yaseNorth Park
IiNkalo eziPhambili zoBuchule boLuntu
I-DURAND - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeNcwadi
Kutheni ngezinye izikhathi iSpeyin ibizwa ngokuba yiCastilian
Mayelana ne-Hayward Fault yaseCalifornia
Xa Usuku Lweminyaka Entsha luhlahla ngoLwesihlanu, ngaba amaKatolika angadla inyama?